December 2018 - RastraKhabar-Nepal's Popular Digital Newspaper
खोइ त पुसमा पानीजहाज ?
December 31, 2018 December 31, 2018 rastrakhabar 0
काठमाडौं, पुस-१६ ।
पुस १६ गते । आजभन्दा ७ महिनाअघि असार १४ गते काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले पानीजहाज र रेलको कुरा गर्दा उडाउने गरेको भन्दै ‘पुस १६ गते पानीजहाज चढ्न टिकट काटेर तयार हुनोस्’ भनेका थिए ।
रोचक कुरा त उनले सोही भाषणकाक्रममा डिजिटल दुनियाँमा बोलेका सबै कुरा रेकर्ड हुने भन्दै विचार गरेर बोल्न आग्रहसमेत गरेका थिए ।
स्रोता–दर्शकलाई मन्त्रमुग्ध पार्नेगरी भाषण गर्ने शैली निकै नै राम्रो शैली हो । अझ त्यसमा विभिन्न विम्ब मिसाएर स्थानीयकरण गर्दै बुझ्ने शैलीमा भाषण गर्नसकेमा झन् राम्रो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो मामलामा माहिर छन् । अझ उनमा अर्को एउटा फरक क्षमता छ, भाषणकैक्रममा उखान, टुक्का र विम्ब मिसाएर हसाउँदै व्यंग्यात्मक शैलीमा भाषण गर्ने ।
तर, पछिल्ला दिनहरुमा उनका बोलीहरु नै उनका लागि समस्या बन्दै गएको पनि पाइन्छ । कतिपय आन्तरिक बैठकमा नेताहरुले उनलाई कम बोल्न पनि सुझाव दिने गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यसले रत्तिभर पनि फरक परेको छैन ।
नेकपा स्थायी समितिको हालै सम्पन्न बैठकमा यही विषयलाई लिएर सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले गम्भीर प्रश्न उठाए ।
‘पार्टी बैठकमा उठाएका गम्भीर विषयलाई मजाक बनाउने ?’ भन्दै उनले ‘दुईतिहाइ शक्ति छ, संविधान संशोधन गरेर दुवैजना प्रधानमन्त्री बन्नोस् तर मजाक नगर्नोस्’–भने ।
२०७५ साल पुस १६ नजिकिँदै गर्दा नै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न तेर्सिन थालिसकेको थियो । ‘के पुस १६ गते पानीजहाज चढ्न पाइन्छ ?’ भनेर ।
उनले बोलीमा लगाम नलगाउँदा ‘पुस १६ गते पानीजहाजको टिकट काटेर तयार रहनोस्’ भन्दै गरेको भाषण अहिले ‘भाइरल’ भएको छ ।
उनले गत जेठ ३ गते काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा डिजिटल दुनियाँमा बोलेका सबै कुरा रेकर्ड रहने भन्दै पुस १६ गते पानीजहाज चढ्न टिकट काट्न आह्वान गरेका थिए ।
देशको कार्यकारी प्रमुखले नै तोकेर दिएको निम्तोले अहिले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै मजाकको पात्र बनाएको छ ।
आफ्नो विरोधीलाई आफूले बोलेका कुरा रेकर्ड भएर बस्ने भएकाले ख्याल गर्न सुझाव दिएका प्रधानमन्त्री स्वयंलाई भने आफ्नै कुरा रेकर्ड भएर बस्छ भन्ने ख्याल नभएको देखियो ।
जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसकेकाले वर्तमान सरकारको औचित्य समाप्त : कांग्रेस सभापति देउवा
December 31, 2018 rastrakhabar 0
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले एकता र मेलमिलापको राजनीति नरुचाएको आरोप लगाएका छन् ।
४३औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका अवसर पारेर सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकार मेलमिलापलाई लत्याएर एकलौटीरुपमा हिँड्न चाहिरहेको जनाए ।
कांग्रेसले प्रजातन्त्रका लागि कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताउदै बीपीले लिएको मेलमिलापको नीति अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताए । एकलौटी हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न कठिन हुने भन्दै देउवाले ढिलो–चाँडो वर्तमान सरकार मेलमिलाप र एकतामा आउने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
देउवाले कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्याराको संरक्षण सरकारले नै गरेको आरोप लगाउदै सरकारले जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसकेकाले वर्तमान सरकारको औचित्य समाप्त भईसकेको बताए।
कांग्रेस नेता नरहरि आर्चाय र गगन थापाले मेलमिलापबाटमात्र समृद्धि सम्भव रहेको बताए ।
बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिबाट नेपालका राजनीतिक पार्टीले पाठ सिक्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ रहेको थियो ।
शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा एनआरटी र मच्छिन्द्र बराबरीमा रोकिए
शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजबाट १२ औं चरणका खेलहरु सुरु भएका छन् ।
१२ औं चरण अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा न्यूरोड टिम एनआरटीले मच्छिन्द्र क्लबसंग ५–५ गोलको बराबरी खेल्यो ।
एन्फा कम्प्लेक्स सातदोवाटोमा भएको खेलको ३० मिनेटमै मच्छिन्द्रले ४-१ को अग्रता लिएको भएपनि त्यो स्थिति जोगाउन नसक्दा जित निकाल्न सकेन ।
बराबरीसँगै एनआरटी अंक तालिकाको पुछारमै रहेको छ भने मच्छिन्द्र क्लब १२ औं स्थानमा रहेको छ । एनआरटीले १२ खेलबाट ६ अंक जोड्दा मच्छिन्द्रको भने ७ अंक भएको छ ।
ए डिभिजन लिगअन्तर्गत आज हुने अन्य खेलहरुमा जावलाखेल युथ क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबसंग तथा फ्रेन्ड्स क्लबले ब्रिगेड ब्वाइजसंग खेल्दैछन् ।
लिगमा एघारौं चरणको खेल सकिदै मनाङ मस्र्याग्दी क्लब च्याम्पियन बनिसकेकोले अब दोस्रो स्थानका लागि घम्साघम्सी भईरहेको छ ।
१४ टिम सहभागी लिगमा ११ खेलबाट च्याम्पियन बनेको मनाङले ३३ अंक जोडेको छ ।
दोस्रो स्थानको लागि भने संकटा क्लब, थ्रीस्टार क्लब र आर्मीबिच भिडन्त जारी छ । संकटाको २५, थ्रीस्टारको २३ तथा आर्मीको २१ अंक रहेको छ ।
मिस शेर्पा २०१८ को उपाधी दोलखाकी दाबुटीले पाउदा मिस्टर शेर्पाको उपाधि सोनम जाङ्बुलाई
दोलखाकी दाबुटी शेर्पा यसपटकको मिस शेर्पाको ताज पहिरिन सफल भएकी छिन् । दिपास इन्टरनेसनलको आयोजनामा काठमाडौंको रामहिटीस्थित रामनगर पार्टी प्यालेसमा डिसेम्बर ३० मा भएको मिस शेर्पाको पाँचौ संस्करणको फिनालेमा ८ प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्दै उपाधि होड जितेकी हुन् उनले । दाबुटीले मिस बेस्ट ट्यालेन्टको अवार्डसमेत हात पारिन् ।
बलिउडका सुपरस्टार अक्षय कुमारसँगको विवाहअघि दुईपटक भएको थियो ट्विंकलको इन्गेजमेन्ट
बलिउडका दुई सुपरस्टार राजेश खन्ना–डिम्पल कपाडियाकी छोरी एवं अक्षय कुमारकी श्रीमती ट्विंकल खन्नाको डिसेम्बर २९ तारिखमा जन्मदिन हो । ट्विंकल खन्ना नायिका हुनुका साथै लेखिका र स्तम्भकार हुन् । उनको जन्मदिनको मौकामा उनीसँग सम्बन्धित केही रोचक कुराबारे जानकारी लिऔं ।
१. एकैदिन हो राजेश खन्ना र ट्विंकलको जन्मदिनः
२. आँखाको शल्यक्रिया गराइसकिन्ः
निकै कमलाई थाहा होला कि ट्विंकल खन्नाको आँखा लाई क्रस आई (डेढो) थियो । सन् १९९५ मा रिलिज भएका केही फिल्ममा उनको आँखामा यस्तो समस्या स्पष्ट देखिन्थ्यो तर केही फिल्म सफल भएपछि उनले यसको उपचार शल्यक्रियामार्फत गराइन् ।
३. कुछ कुछ होता हे अस्विकारः
करण जोहर ट्विंकल खन्नाका निकै राम्रा साथी हुन् । फिल्म कुछ कुछ होता हे मा टिनाको भूमिका सुरुमा ट्विंकल खन्नालाई अफर गरिएको थियो । करणले यो भूमिका ट्विंकललाई नै दिमागमा राखेर लेखेका थिए तर उनले अस्विकार गरेपछि यो रोल रानी मुखर्जीलाई दिइयो ।
४. डिम्पलले अक्षयलाई समलिङ्गी ठान्थिन्ः
एक च्याट शोमा ट्विंकलले बताए अनुसार जब अक्षय उनकी आमा डिम्पलसँग ट्विंकलको हात माग्न गएका थिए तब उनी सोचमग्न भएकी थिइन् किनभने ट्विंकलका कुनै साथीले बताएका थिए कि अक्षय कुमार समलिङ्गी हुन् ।
५. दुई पटक भएको थियो इन्गेजमेन्टः
पहिलो पटक अक्षयसँग इन्गेजमेन्ट भएपछि दुबैको ब्रेकअप भएको थियो जसका कारण इन्गेजमेन्ट टुटेको थियो । दुबैको पुनः कुरा मिलेपछि विवाह अघि दुबैले एकपटक इन्गेजमेन्ट गरे ।
सीमा कडाईः नेपाल प्रहरीले रोक्यो मालवाहक भारतीय ट्रक
रुपन्देही, पुस-१६ ।
क्षमता भन्दा बढी सामान बोक्ने मालवाहक भारतीय सवारीसाधनलाई रुपन्देही प्रहरीले सीमा नाकामा रोकेको छ ।
ओभरलोड गरिएको गाडीलाई यातायात व्यवस्था विभागले नियन्त्रण गर्न नेपालभरका ट्राफिक प्रहरीलाई पत्राचार गरेपछि रुपन्देही प्रहरीले भारतीय ओभरलोड गाडीहरुलाई रोकेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ ।
बेलहिया नाकामा हालसम्म औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेका ३० भन्दा बढी ओभरलोड गरिएको गाडीहरु रोकिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख बेद पौडेलले जनाए ।
गृह मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो निर्णय अनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेका भारतीय ओभरलोड गरिएको गाडीहरुलाई नाकादेखि बढीमा १५ किलोमिटरसम्म जान छुट दिइएको थियो ।
१५ किलोमिटरको नाममा भारतीय ओभरलोड गरिएका गाडीहरु कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लाका उद्योगहरुसम्म समेत पुग्ने गरेका थिए ।
यता, यातायात व्यवस्था विभागको पत्रलाई प्रहरीले कार्यान्वयनमा ल्याएर भारतीय ओभरलोडका गरिएका गाडीहरु रोक्न थालेपछि यातायात व्यवसायी भने बिरोधमा उत्रिएका छन् ।
बंगलादेशमा भएको आम निर्वाचनमा शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिग बहुमतका साथ विजयी
बंगलादेशमा भएको आम निर्वाचनमा बहालवाला प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको पार्टी अवामी लिग बहुमतका साथ विजयी भएको छ ।
हिजो सम्पन्न भएको निर्वाचनमा अवामी लिगले आफ्नो पकड पुनः दोहोर्याएको छ । अवामी लिगले ३ सय ८० संसदीय क्षेत्रमध्ये २८१ मा आफ्नो जित निकाल्न सफल भयो ।
बहुमतको साथ जित निकालेसंगै प्रधानमन्त्री हसिनाले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सुरक्षित गर्न सफल हुनु भएको छ ।
तर बंगलादेशको मुख्य विपक्षी दल बंगलादेशले नेस्नलिस्ट पार्टीले भने निर्वाचन परिणामलाई अस्वीकार गरेको छ ।
मुख्य विपक्षी दलले निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै पुनः मतदानको मागसमेत गरेको छ । बीएनपीका प्रवक्ताले २२१ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन् ।
मतदान सुरु हुनुपूर्व नै विपक्षी गठबन्धनका झण्डै ४७ उम्मेदवारले निर्वाचनमा गडबडी हुन लागेको भन्दै बुथ बहिष्कार गरेका थिए ।
आम निर्वाचनका क्रममा भएको हिंसामा परी बंगलादेशमा १७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
धर्मका बारेमा नेपाली कांग्रेसमा कुनै प्रस्ताव आएको छैनः सहमहामन्त्री डा.महत
नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले धर्मको बारेमा पार्टीमा कुनै किसिमको प्रस्ताव नआएको र छलफलसमेत नभएको जनाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति इलामले आयोजनामा गरेको नेता तथा कार्यकर्ता साथै पत्रकार भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै डा. महतले हिन्दू धर्मको बारेमा पार्टीमा कुरा नउठेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सहमहामन्त्री डा. महतले गुट बन्दी पार्टीका लागि घातक भएको भन्दै अब व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गुटबन्दी गर्न नहुने जनाए । डा महतले सरकारले संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार गरेको स,मेत आरोप लगाए ।
हिजोका दिनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अघि बढे नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी हुने बिश्वास डा. महतले ब्यक्त गरे ।
सन् २०१८ नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ऐतिहासिक रह्यो
काठमाडौं, पुस १६ । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सन् २०१८ महत्वपूर्ण वर्ष सावित भएको छ । यसवर्ष अहिले सम्मकै सबैभन्दा बढी १० लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे । देशमा सहज परिस्थिति सिर्जना भइ पर्यटक आगमनमा बृद्धि हुँदै गएपछि पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१८ को ११ महिनामै १० लाख एक हजार ९३० विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन् । जसले नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ उत्साह जगाएको छ । सन् २०१७ मा १० लाखको हाराहारीमा विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
सन् २०१६ मा ७ लाख ५३ हजार पर्यटक आएका थिए ।
बोर्डले छिमेकी मुलुक चीन र भारत लक्षित प्रभावकारी रुपमा चलाएको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमले पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । घुमफिरजस्ता प्रवर्द्धन अभियानले आन्तरिक पर्यटक पनि उल्लेख्य रुपमा बढेका छन् । नेपालीमा विभिन्न गन्तव्यमा घुम्न निस्कने र खर्च गर्ने बानी बढेको छ । सरकारले नयाँ गन्तव्य पहिचान र प्रवद्र्धनका लागि सय गन्तव्य घोषणा गरी कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन पर्यटन मन्त्रालयले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि बढाउन विभिन्न समिति बनाएर काम अघि बढाएको छ ।
होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) का अनुसार अहिले होटलको ‘बेड’ सङ्ख्या ३७ हजार छ । सन् २०२० सम्म करीब छ हजार बेड सङ्ख्या थपिनेछ । अहिलेकै अवस्थामा २५ लाख पर्यटक थान्न सकिने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । काठमाडौं उपत्यका र बाहिर गरी १० वटा पाँच तारे होटल निर्माण भइरहेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयले करीब ४५ वर्षपछि पुरानो पर्यटन ऐन २०३५ परिवर्तन गरी नयाँ पर्यटन ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । उक्त ऐनको मस्यौदा तयार भई पारित हुने प्रक्रियामा छ ।
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले खरीद गरेको वाइड बडी जहाज भित्रिँदा जति चर्चा छायो, त्यतिकै उक्त जहाजको खरीद प्रक्रियाको अनियमितताबारेको विवादको चर्चा चुलियो । पहिलो जहाज वाइड बडी ‘ए’ ३३०–२०० ‘नाइन एन एएलवाइ’ कलसाइनको ‘अन्नपूर्ण’ गत असार १४ गते र दोस्रो वाइड बडी ‘ए’ ३३०–२०० ‘नाइन एन एएलजेट’ कलसाइन ‘मकालु’ विमान साउन १० गते काठमाडौं अवतरण गरेका थिए । हाल यी दुवै जहाज निगमका पुरानै गन्तव्यमा उडान भर्दै आएका छन् । सरकारको ग्यारेन्टीमा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको १२÷१२ अर्बको ऋणबाट दुई जहाज खरीद गरिएको हो ।
मुलुकमा भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पर्यटन क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो ‘इभेन्ट’ को रुपमा लिइएको दोस्रो ‘हिमालयन ट्राभल मार्ट–२०१८’ गत जेठ १८ र २० गते काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयको अगुवाइमा प्यासिफिक एसिया ट्राभल एशोसिएशन पाटा नेपाल च्याप्टरले आयोजना गरेको मार्टमा २६ देशबाट ५९ कम्पनी सहभागी थिए ।
यस्तै गत भदौ १४ र १५ गते काठमाडौँमा भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको प्रयास (बिम्सटेक) सम्मेलनमा सम्बन्धित राष्ट्रप्रमुख पाहुनाको आगमनले पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको पहिचान दिलाउन सम्मेलन उपयोगी बन्यो ।
मङ्सिर १५ र १६ गते काठमाडौँमा भएको एशिया प्रसान्त सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका पाहुना आए । यो सम्मेलनले पनि पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री, म्यानमारकी नेत्रीलगायतले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । नेपाल र कम्बोडियाबीच सिधा हवाई उडान गर्ने सम्झौता भयो । जुन पर्यटन क्षेत्रका लागि उपलब्धिमूलक मानिएको छ ।